Nkwado - BXL Creative Packaging
Nkwado na-adịgide adịgide Taa na Echi
Dabere na nghọta nyocha nke IBM, nkwado dịruola oge isi. Ka ndị na-azụ ahịa na-anakwere ihe ndị metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ha, ha na-achọ ngwaahịa na ụdị ndị kwekọrọ na ụkpụrụ ha. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 6 n’ime ndị na-azụ ahịa iri n’ime ndị a gbara ajụjụ ọnụ dị njikere ịgbanwe agwa ịzụ ahịa ha iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 8 n’ime ndị na-aza 10 na-egosi nkwado dị ha mkpa.
Maka ndị na-ekwu na ọ dị ezigbo mkpa, ihe karịrị 70% ga-akwụ ụgwọ nke 35%, na nkezi, maka ụdị ndị ga-adigide na gburugburu ebe obibi.
Nkwado bụ ihe dị oke mkpa maka ụwa niile. BXL Creative na-ebu ọrụ ya iji nye ndị ahịa mba ụwa ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi ma na-enye aka na nkwado ụwa.
Mgbe imepụta ihe na ngwugwu ngwugwu eco. BXL Creative emeriwo onyinye onyinye kacha mma na asọmpi Mobius na ngwugwu ngwugwu Huanghelou.
Na ngwugwu a, BXL na-eji eco paper & paperboard iji wuo igbe dị ike, ma jikọta ya na ụdị ihe osise iji imitateomie ụlọ nke Huanghelou. Ihe ngwugwu niile na-anapụta nlekọta anụ ụlọ na ọrụ mmekọrịta BXL Creative, ma n'otu oge ahụ, ọ na-enye ọmarịcha nka.
Enwere ike iji nkwakọ ngwaahịa pulp, nke aha ya bụ eriri a kpụrụ akpụ, dị ka eriri eriri ma ọ bụ eriri eriri, nke bụ ihe nkwakọ ngwaahịa eco, ebe ọ bụ na e sitere na ihe dị iche iche fibrous, dịka akwụkwọ eji emegharị emegharị, kaadiboodu ma ọ bụ eriri anụ ndị ọzọ (dị ka okpete, achara , ọka wit), ma nwee ike weghachite ọzọ mgbe ọ bara uru na ndụ.
Ihe dị mkpa nke nkwado zuru ụwa ọnụ enyerela aka mee ka nkwakọ ngwaahịa pulp bụrụ ihe ngwọta mara mma, ebe ọ bụ na ọ ga-emebi emebi n'agbanyeghị enweghị mkpofu ma ọ bụ nhazi usoro.
Ibi Ndụ kwekọrọ na Nature
Ihe ngwungwu ngwungwu a gbadoro uche na gburugburu ebe obibi. Emepụtara ya maka akara osikapa kacha ama ama na Wuchang Rice.
Ihe ngwugwu a nile bu akwukwo eco iji kechie osikapa na ibiputa ya na onodu ohia nke ohia iji ziputa ozi nke ndi mmadu na eche banyere ndu ohia na gburugburu ebe obibi. Akpa ngwugwu a na-adabere na nchegbu eco, nke ejiri owu na-eme ya ma nwee ike ịghaghachi dị ka akpa bento.
Ihe atụ ọzọ zuru oke iji gosipụta ihe ngwugwu na-anapụta, mgbe ihe okike jikọtara ya na ngwugwu ngwugwu eco.
BXL Na-emepụta ngwungwu ngwugwu a na-eji naanị ihe ederede eco naanị, site na igbe dị na mpụga n'ime tray. The tree na-stacking na n'ígwé nke corrugated paperboard, na-enye zuru nchebe maka mmanya kalama n'oge ihe ọ bụla ike njem.
A na-ebipụtakwa igbe dị na mpụga bụ “Antelope Na-apụ n’anya nke Ndị Tibet” iji zie ọha mmadụ ozi na anụ ọhịa na-apụ n'anya. Anyị kwesịrị ime omume ugbu a ma mee ihe ndị dị mma maka okike.